फेरि एकै ठाउँ होलान् मेस्सी र ग्वार्डिओला ? - Deshko News Deshko News फेरि एकै ठाउँ होलान् मेस्सी र ग्वार्डिओला ? - Deshko News
फेरि एकै ठाउँ होलान् मेस्सी र ग्वार्डिओला ?
बार्सा, भदौ २ एजेन्सी
च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलमा लज्जास्पद हार बेहोरेपछि बार्सिलोनाको कमजोरी छताछुल्ल भएको छ। बार्यनसँग शुक्रबार ८–२ ले पराजित भएपछि बार्सिलोनाको व्यवस्थापनमै पनि कमजोरी रहेको चर्चा सुरु भएको छ ।
त्यस्तै पीडा छ बार्सिलोनाका पूर्व प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाको । उनको टोली म्याचचेस्टर सिटी पनि यसपटक क्वार्टरफाइनलबाट बाहिरियो । सिटी लगातार तेस्रो वर्ष अन्तिम आठबाट बाहिरिएको हो । त्यसअघि बायर्न म्युनिखमा रहँदा पनि पेपले टोलीलाई उपाधिसम्म डोर्याउन सकेका थिएनन् ।
लियोनल मेस्सी र ग्वार्डिओलासँगै रहँदा भने बार्सिलोनालाई ठूला ठूला सफलता दिलाएको इतिहास छ । जति बेला उनीहरु एउटै टोलीमा थिए, टोलीले अहिलेको जस्तो हार बेहोर्नुपरेको थिएन । पछिल्ला सिजनमा मोनाको, लिभरपुल, टोटेनहम र यो पटक लियोनसँग पराजित हुँदै ग्वार्डिओलाको ८ सय मिलियन युरोको टोली सिटी सेमिफाइनल पुग्नबाट बन्चित रह्यो ।
ग्वार्डिओलाले मेस्सी विना सिटीबाट च्याम्पियन्स लिग जित्न अझै बाँकी रहेको छ । बायर्न म्युखिनका पूर्व प्रशिक्षक ग्वार्डिओला विना पनि मेस्सीले भने २०१५ मा च्याम्पियन्स लिग उपाधि जितेका थिए । त्यसबेला ब्राजिलियन फरवार्ड नेयमारको उच्च प्रदर्शन बार्सिलोनाको जितेको आधार थियो । त्यसयता बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग जित्न सकेको छैन ।
ग्वार्डिओलाले बार्सिलोनाको नेतृत्वमा रहँदा अर्जेन्टिनी फरवार्ड मेस्सी खुसी थिए । यद्दपी त्यति बेला युवा खेलाडी थिए । उनका वरिपरि सिनियर खेलाडी रहन्थे । मेस्सी रहँदा कुनै पनि टोलीको प्रशिक्षक पक्कै खुसी हुन्छन् । तर मेस्सीको खुसीले नै खेलमा उनको सफलता फरक पर्छ ।
च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा ग्वार्डिओला निकै दबाबमा रहेको बताइन्छ । उनले क्याप नोउमा रहँदा ४–३–३ को प्रणालीमा खेलाउँथे । बार्सिलोनासँग मेस्सीको सम्झौता सन् २०२१ को जुनमा सकिनेछ । सिटीमा पनि गुआर्डीओलाको सम्झौता २०२१ सम्म नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा दुवै एकसाथ देखिने सम्भावना पनि छ ।
मेस्सीले पछिल्लो समय बार्सिलोनामा अब नरहने संकेत गरेका छन् । अहिले पनि कतिले बार्सिलोनामा मेस्सीको भविष्य अन्यौलमा रहेको अनुमान गरेका छन् । गुआर्डीओला पनि सिटीलाई च्याम्पियन्स लिग उपाधि दिलाएर नै बिट मार्न चाहन्छन् । यस्तोमा दुवैलाई एक अर्काको साथ चाहिएको छ । दुवैलाई एकै क्लब देख्न पाइएला त ?